Geekbench wuxuu xaqiijinayaa qaar ka mid ah astaamaha Realme GT 5G | Androidsis
El Realme GT 5G ayaa la sii deynayaa Waxay noqon doontaa kaliya seddex maalmood gudahood inaan si buuxda u ogaan doonno maxaa yeelay soo bandhigida iyo soo bandhigida dhacdadan casriga ah ee waxqabadka sare leh ayaa dhici doonta Maarso 4, sida Waxaan horeyba ugu wargalinay waqtigeeda.
Ugu dambeyntiina, Geekbench wuxuu tijaabiyey taleefanka, isagoo kashifaya ama xaqiijinaya qaar ka mid ah astaamaheeda iyo tilmaamaha farsamo. Liiska ayaa lagu xusay Qualcomm Snapdragon 888, processor-ka ugu awooda badan ee soo saaraha semiconductor-ka Mareykanka ee 2021-ka.
Waa tan waxa Geekbench ka yiraahdo Realme GT 5G
Marka loo eego waxa ku qoran liistada 'Realme GT 5G', taleefannada casriga ah waxaa lagu soo bandhigi doonaa nidaamka hawlgalka ee 'Android 11', oo ah wax aan horay u filaynay. Dhanka kale, sidaan horeyba u iftiiminay, Snapdragon 888 wuxuu noqon doonaa SoC oo ku siinaya awood iyo karti oo ay weheliso LPDDR5 RAM ah, oo ku saleysan Geekbench, waa 12 GB. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jiri lahaa nooca 8GB, iyo sidoo kale laba 128GB iyo 256GB xulashooyinka bannaan ee keydinta gudaha oo noqon doona nooca UFS 3.1.
Waxaa la sheegay in Realme GT 5G uu la imaan doono 125W UltraDart tikniyoolajiyad xawaare sare leh. Tan awgeed, waxaan ka heli doonnaa xawaare xawaare ah 0% illaa 100% qiyaastii 30 daqiiqo ama, iyadoo ku xiran awoodda batteriga qalabka, oo aan weli la aqoon, waxay noqon lahayd xitaa waqti ka yar. Tan ka sokow, waxaa la qiyaasayaa in batteriga taleefanka uu u dhexeyn doono 4.500 ilaa 5.000 Mah.
Realme GT 5G on Geekbench oo leh Snapdragon 888
Dhinaca kale, shaashadda aaladda waxay noqonaysaa qiyaastii 6.8 inji waxayna soo bandhigi doontaa heerka cusbooneysiinta ee 120 Hz. Dhanka kale, kamarada afar geesoodka ah ee ay yeelan laheyd waxaa hogaamin doona 64 MP aaladda ugu weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Geekbench wuxuu xaqiijinayaa qaar ka mid ah astaamaha Realme GT 5G